अध्यक्ष गुप्तालाई कस्ले भन्छ ? ‘तैले मान्छेलाई गन्न छाडिस, गोली हानेर मारिदिन्छु’
नवलपरासी । पाल्हिनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक गुप्तालाई अज्ञात व्यक्तिले मार्ने धम्की दिने गरेकाे छ । अध्यक्ष गुप्ताले टेलिफोनबाट पटक पटक मार्ने धम्की आएको बताए । ‘तैले आजकल मान्छेलाई गन्न छाडेको
८ महिने शिशु पनि बलात्कृत !
भारत । मानिसकाे मन कति कठोर र निर्दयी हुन्छ भन्ने एक घटना सार्वजनिक भएको छ । भारतको उत्तर पश्चिम दिल्लीको सकुर बस्तीमा घटेको यो घटना सुन्दा अचम्म लाग्छ, तर यो
करेण्ट लागेर मजदुरको मृत्यु
नुवाकोट । विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ कोलोनीमा घर निर्माणको क्रममा मंगलबार एक मजदुरको करेण्ट लागेर मृत्यु भएको छ । वाराको सिम्रोनगढ–८ का २३ वर्षीय शिव महतोलार्इ कोलोनीका विनोदकुमार गुरुङको
धराशायी हुँदै ‘पाल्पाली करुवा’ उद्योग
पाल्पा । पाल्पाको पहिचान बोकेका ‘पाल्पाली करुवा’ उद्योग धराशायी बन्दै गएका छन् । सदरमुकाम तानसेनस्थित टक्सारटोलका उद्योगमा पर्याप्त मात्रामा करुवा उत्पादन हुँदै आए पनि पछिल्ला वर्षमा कच्चापदार्थ र दक्ष कामदारको
बेपत्ता भएको नौ महिनापछि जंगलमा कंकाल भेटियो
तेह्रथुम । तेह्रथुममा बेपत्ता भएको नौ महिनापछि एक व्यक्तिको कंकाल भेटिएको छ । म्याङलुङ नगरपालिका–९ साब्लाका ६८ वर्षीय पदमबहादुर लिम्बूको झुण्डिएर आत्महत्या गरेको अवस्थामा म्याङलुङ नगरपालिका–६ स्थित पात्लेचौर सामुदायिक बनको
एकताबाट कोही पछि हट्नै सक्दैनः सचिव भट्टराई
रोशन श्रेष्ठ तेह्रथुम । नेकपा एमालेका सचिव एवम् ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित योगेश भट्टराईले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई अब कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन् । भट्टराईले नेकपा
जनता टेलिभिजन टोली चीन प्रस्थान
काठमाडौं । चीनको स्याटलाईट टीभी एलाइन्सको बैठकममा भाग लिन जनता टेलिभिजनको ६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चीनको सियान प्रान्त प्रस्थान गरेको छ । प्रतिनिधिमण्डलले स्टलाईट टीभी एलाइनसको कार्यकारी समितिको बैठकमा सहभागीता जनाउने
मलामी बोकेको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा एकको मृत्यु, आठ घाइते
डडेल्धुरा । डडेल्धुरामा सोमबार राति मलामी पु्र्याउन गएको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने आठजना घाइते भएका छन् । सोमबार राति करिब ८ बजेतिर मलामी बोकी फर्किरहेको से
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज बिहिबार नेपाल आउँदै
काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज यही बिहिबार नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छिन् । नेपालमा वाम सरकार गठनको तयारी हुँदै गर्दा उनी नेपाल आउन लागेकी हुन् । स्वराज नयाँ बन्ने
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देश र जनताका लागि अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने व्यक्ति मात्रै शहीदका लागि योग्य हुने यथार्थलाई सधैं ख्याल गर्नुपर्ने बताएकी छन्। शहीद दिवसका अवसरमा सन्देश दिँदै